11/10/2018 - Page 2 sur 3 -
Antananarivo – Renivohitra : Mbola miaina anaty loto sy fako ny mponina
11/10/2018 admintriatra 0
Araka ny fantatra teo aloha teo, nanao ezaka fanadiovana tamin’ireo faritra tamina boriborintany vitsivitsy ny teo anivon’ny kaomina Antananarivo Renivohitra (CUA). Natao izany satria nisavovona, ary tsy nisy naka ireo fako nitoby tamin’ireo daba-pako isaka …Tohiny
Fanafihana tany Brickaville : Telolahy voasambotra
Ela notoratorahana ka nahavoa mason’angotra, izay no azo ilazana ireto jiolahy mpampihorohoro vahoaka tao amin’ny distrikan’i Brickaville ireto. Ravan’ny polisy ny telo tamin’ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-basy tsy nisy fitsaharana, tao amin’ny kaomina Ambinaniniony distrikan’i …Tohiny
Tsiroanimandidy : Olona iray matin’ny pesta
Nitombo iray indray ny olona namoy ny ainy vokatra ny aretina pesta. Tany Tsiroanimandidy no nisehoan’izany tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity. Tamin’ny lalana hamonjy ny hopitaly ity olona ity no fantatra nindaosin’ny fahafatesana, araka ny fampitam-baovao …Tohiny
Tafapetraka eto Madagasikara ny birao maharitra ny orinasa Tokyo Sangyo izay hisehatra eo amin’ny famokarana angovo, famokarana milina izay ho ampiasaina amin’ny fambolena sy famokarana glace izay ho ampiasaina eo amin’ny sehatra ny jono. Anisan’ny …Tohiny